Software-ka lagu helo qiimaha sharad ee sharadka khadka tooska ah
Xitaa haddii aad horeyba uga tiirsanaan jirtay khadka tooska ah ee internetka, barnaamijkan isboorti ee isboortiga asalka ah wuxuu caddayn karaa inuu faa'iido badan u leeyahay inuu kaa caawiyo inaad fahamto sida loo helo caan ah sharad qiime.
Waxaan badanaa ka aqrinaa khadka tooska ah in xaqiiqda dhabta ah ee dhacdo horeyba loogu soo daray qormooyinka buug-yaraha, taas oo si cad ugu beddeleysa faa'iidadooda iyaga oo codsanaya canshuur (premium).
Betting Tipster waxay ku siineysaa suurtagalnimada, markaad gasho qiyaasahaaga (boqolley ahaan) murugada dhacdada ee calaamadaha 1-X-2 iyo qaddiyadaha qaraabada ah ee ay bixiyaan buugaag sameeyayaasha, si loo muujiyo khilaafaadkaas oo, aragti ahaan, buug sameeyaha uu ku siinayo boqolkiiba faa'iido leh.
Sida loo helo sharadka qiimaha: adoo adeegsanaya Betting Tipster
Markaad soo dejiso barnaamijka oo aad bilowdo fulintiisa ku jirta galka, waxaad isku arki doontaa hortiisa daaqadda kaliya ee barnaamijka, oo ay ku jiraan qaybaha kala duwan ee lagu gelayo xogta.
Dhinaca bidix ee barnaamijka (Qiyaastaada) qiyaasahaaga waxaa loo gelayaa boqolkiiba inta suurtagalka ah ee natiijooyinka 1-X-2 ee ciyaar kubbadda cagta ah.
Dhinaca midig bedelkeeda (Dhibaatooyinka Buugga) waxaad gali doontaa waxyaabaha laguugu deeqo ee ku saabsan suurtagalnimada natiijada shaqsiyeed.
Marka tan la sameeyo, guji batoonka hoose (Hubi Xaqiijinta Ciyaaraha.
Sida loo helo qiimaha sharadka: dka xaddid kootada khidmadda
Asal ahaan barnaamijkan loogu talagalay hel qiimaha sharadka ciyaaraha sharadka wuxuu si otomaatig ah uga nadiifiyaa cashuurta codsatay iyo, marka aad isbarbar dhigto boqolleyda dhabta ah ee buuggu ku qiyaasay boqolleyda aad qiyaastay ee aad gashay, waxay hubin doontaa haddii qaddarrada laguu soo bandhigay ay ka hooseeyaan ama ka sarreeyaan, marka la eego bixinta, marka loo eego qiyaasahaaga dhacdada aad rabto in sharad lagu galo.
Sidan oo kale, haddii aad ku guuleysatid inaad sameyso qiyaas ka wanaagsan tan kuwa sameeya buugga, muddada dhexe / muddada dheer waxaad hubaal ka heli doontaa faa'iido!
Haddii qaddarinta ay kuu soo bandhigtay buug-yarahu ay ka weyn tahay qiyaastaada, sanduuqa isku dheelitirnaanta ee khuseeya wuxuu isu rogi doonaa cagaar sida sawirka tusaalaha ah, oo muujinaya fursadda sharadka maadaama ay leedahay qiime wanaagsan oo la filayo (EV +).
Kuwani marka la soo koobo waa howlaha fudud laakiin waxtar leh ee barnaamijkan sharadka, Betting Tipster waxay siisaa awood aad ku maareyso ilaa 6 dhacdo, laakiin sida iska cad waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa si badbaado leh si loo hubiyo hal ciyaar.
Soo Degso Fayl	MyTipster.zip - 1 MB
4895 XNUMX Soo degsasho